Aprimo | Ahịa Tech Video
Thursday, January 27, 2011 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Anyị nwere oke ọ toụ ịmalite usoro ọhụrụ n'akụkụ Akwụkwọ Akụkọ Teknụzụ na ndị Teknụzụ Mgbasa Ozi Azụmaahịa… Anyị na-ebido usoro ihe omume vidiyo nke Teknụzụ Teknụzụ!
Kwadoro ma mepụta ya 12 Kpakpando Media, usoro a ga - ewebata gi nye ulo oru uzu ahia teknụzụ na ndị n’azụ ngwaahịa na ọrụ ahụ! Nke mbụ n’ime usoro anyị bụ Aprimo, Ahịa akpaaka ụlọ ọrụ na a Ngwá ọrụ dị oke egwu maka ndị ahịa.
N'ebe a na Indianapolis, anyị nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ahaziri maka vidiyo. Ma echegbula! Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ teknụzụ ahịa gị anọghị na etiti Indiana, anyị ga-enweta eserese n'aka gị na 12 Stars Media ga-agwakọta vidiyo ahụ n'onwe ha. Buru n'uche, n'ezie, na ndepụta nchere adịlarị ogologo ma enwere ụfọdụ ụgwọ ịme vidiyo ahụ.
Kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ onye ọzọ! Special ekele Rocky na Zach si 12 Kpakpando Media maka oke ọrụ dị otu a.
Esola: Ihe Ndị Na-ere Ahịa Kwesịrị Knowmara